कोरोना-त्रासबीच गाउँले जगाएको आशा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोना संक्रमणबाट हजार कहर सहनुपरे पनि गाउँमा बेरोजगारहरूले काम र दाम अनि भोकमरीबाट मरिने भयका बीच जिउन बाध्य मानिसहरूले आशाका झिल्काहरू देख्न थालेका छन् ।
जेष्ठ १८, २०७७ प्रभा कैनी
कोरोना महाव्याधिका कारण सम्भावित भोकमरी र कष्टको आकलन गरेर धेरैले गाउँको बयान गर्न थालेका छन् । व्यापार, विकास, उन्नति, प्रगति, भ्रमण र मनोरञ्जनजस्ता विषय गौण भएका छन् ।
खानै नपाएर मरिने हो कि भन्ने आशंकाले पिरोलिएकाहरूबाट जिउने पहिलो आधार खोज्ने क्रममा ‘गाउँ जाने’, ‘कृषि व्यवसाय गर्ने’, ‘बाँझा बारी खन्ने’ जस्ता उद्गार आउन थालेका छन् । हुन पनि नेपालीलाई हरेक दुःखका घडीमा गाउँले साथ दिँदै आएको छ । भूकम्प आयो, मानिसहरू गाउँतिर लागे ! कोरोनाको प्रभाव बढ्न थाल्यो, सहर छोडेर गाउँतिर भाग्दै छन् । सहरजस्तो निष्ठुरी हुँदैन गाउँ । नातागोता, इष्टमित्र, छरछिमेकीको एकता र सद्भावले जेलिएको हुन्छ गाउँ । ‘मर्दाको मलामी, जिउँदाको जन्त’ भन्दै कर्तव्यको भाषा बोलिन्छ गाउँमा । कामको माचोमा भारो पर्म, खरखाँचोमा ऐंचोपैंचोले सामूहिकताको भावना जीवन्त भइरहेको हुन्छ त्यहाँ । यता सहरमा भीडमा हिँडे पनि मानिसले आफूलाई नितान्त एक्लो महसुस गर्छ । घनिष्ठता कम हुन्छ । छिमेकीहरूलाई पनि चिनेको नचिन्यै गर्ने आदत विकास भएको हुन्छ, सहरियाहरूमा ।
भकारीभरि आफ्नै खेतको धान, आँगनमा मकैका सुली अनि घरको माथिल्लो तलामा भटमास, कोदो, फापर, तोरी, मस्याङ लगायत राखिएका सानाठूला बाँसका कोठी र डालीहरू । करेसाबारीमा मौसम अनुसारका साग, मुला, फर्सी, बोडी, भिन्डी, भान्टा, करेला, घिरौंला चिचिन्डाजस्ता तरकारी र केही साना ड्याङहरूमा अदुवा, हलेदो र लसुन । जोत्नका लागि कम्तीमा एक हल गोरु र दूधका लागि गाईभैंसी अनि मासुका लागि बाख्राको समेत जोहो । समग्रमा यस्तै उत्पादन र उपभोगबाट गाउँलेहरूको आजीविका धानिन्थ्यो । चार-पाँच दशकपहिलेसम्म कृषिजन्य गुजारामुखी पारिवारिक अर्थव्यवस्था लगभग यस्तै थियो । अहिले यस प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आएको छ, केही बाह्य प्रभावले त केही हाम्रै अदूरदर्शिताले । त्यति विघ्न आत्मीयता दर्साउने र आपत्तिमा आश्रय दिने हाम्रा गाउँहरू किन दिनानुदिन उजाड हुँदै गए ? किन युवारहित र ऊर्जाविहीन हुन पुगे हाम्रा गाउँहरू ? किन भावनाको प्रतीकात्मक स्थलमा मात्र सीमित हुँदै छन् हाम्रा गाउँहरू ? एकै दिन र एकै छिनमा परिवर्तित भएका होइनन् हाम्रा गाउँहरू । यसमा निश्चयै केही कारण र बाध्यता थिए/छन् ।भावनात्मक प्रेम हुँदाहुँदै पनि बढ्दो जनसंख्याका आवश्यकता पूरा भएनन् गाउँमा । धेरैको हकमा, घामपानी सहेर अति मिहिनेतसाथ छ-सात महिना बिताएर उब्जाएको उब्जनीले पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन थाल्यो । धेरै दुःख, थोरै आम्दानी ।
वर्षभरिको मिहिनेतको हिसाबकिताब हुन थाल्यो । उत्तर निस्कियो— घाटाको जिन्दगानी कतिन्जेल तानिरहने ? बरु लाग्ने त्यतैतिर जहाँ श्रम बेचे नगद हात लाग्छ र त्यही रकमले जे चाहियो त्यही किन्न पाइन्छ । सहरले आकर्षित गर्‍यो गाउँलेलाई । सहरमा पैसाले हरेक सुविधा किन्न सकिने देखेर गाउँको कृषकले आफ्नो जीवनको तुलना गर्न थाल्यो ।
धारापानी, बिजुली, स्कुल, कलेज, अस्पताल, सडक र हरकिसिमका सुविधा र मनोरञ्जन, जुन गाउँमा सजिलै मिल्दैन, सहरमा प्राप्त हुने उसले देख्यो । सहरले श्रम किन्छ, नगद दिन्छ । नगदले जे चाह्यो उही पाइन्छ, जति चाह्यो उति लिन मिल्छ, जति बेला चाहियो उति बेलै ल्याउन पाइन्छ । त्यसैले त ‘बाबुआमाबाहेक सबै थोक किन्न पाइन्छ सहरमा’ भन्छन् गाउँलेहरू । मात्र नगदको जोहो भए पुग्यो । नगद मिल्छ सहरमा, गाउँमा त जिन्सीकै राज छ, केही हदसम्म अझै पनि ।
गाँवैगाउँले भरिएको हाम्रो देशमा गाउँको उन्नति कहिल्यै अपरिहार्य ठानिएन भन्न चाहिँ मिल्दैन । योजना आयोगमा किसानको तस्बिर झुन्ड्याउन सुझाउने बीपी कोइरालाको गाउँले किसानको ‘एउटा सानो घर, खेती गरी खाने जमिन, एउटा दुहुनो गाई, छोराछोरी पढाउन पाउने र बिरामी पर्दा औषधि गर्न सकिने कृषकको...’ परिकल्पना समग्रमा गाउँले जीवन उकास्ने आशयले गरिएको थियो । आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार काम गर्ने अवसर नमिलेका कारण उनीप्रति गुनासो गर्ने ठाउँ उति रहेन । राजा महेन्द्रले ‘गाउँ फर्क अभियान’ घोषणा गरेर एकोहोरो सहरतिर आकर्षित जनतालाई गाउँतिर फर्काउने प्रयत्न त गरेका हुन्, तर राजकीय घोषणामा ‘अभियान’ भनिए पनि त्यो साँच्चिको अभियान भने साबित हुन सकेन । केही समय केही पञ्चलाई फलिफाप गराउने नाराबाहेक यस घोषणाबाट अभिप्रेरित भएर न सहर पस्ने गाउँ फर्किए, न अभियानका रूपमा समाजमा यसले कुनै उत्सुकता नै पैदा गर्‍यो ।
एमाले पार्टी पनि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने आह्वानसहित चुनावमा होमिएको हो । परन्तु राजा महेन्द्रको घोषणाभन्दा यो अभियान कुन अर्थमा मात्रै फरक रह्यो भने, एमाले हजारौं युवा नचाएर चुनाव जित्न सफल भयो तर गाउँलेको आशा र आपेक्षामा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन । यसै गरी हरेक सरकार र अनेक एनजीओले पनि गाउँ विकासको दुहाई दिइरहेकै छन् । हरेक पार्टीका हरेक उम्मेदवारले गाउँको उन्नतिका लागि घोषणापत्रमा लेख्ने मात्र नभई, भाषणमा ‘बसूँबसूँ लाग्ने सुनको थाल बनाउँछु गाउँलाई’ भन्ने प्रतिबद्धता गर्न पनि भुलेनन् । तर पनि गाउँ पछाडिको पछाडि नै रह्यो । उन्नति र विकासका जे-जति काम भए, अधिकांश सहरकेन्द्रित रहे, जसले गर्दा मानिस सहर पस्ने प्रवृत्ति घटेन, न त सहर पसेकाहरू गाउँ फर्किए । किन यस्तो भयो होला त ?
यसको पहिलो कारण हो— विश्वव्यापीकरणको एकछत्र प्रभाव । यातायात, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै युवाहरूले आफ्नो जमिनको भन्दा बाहिरको कमाइ सुविधाजनक र नाफामूलक ठहर्‍याए । संसारको कहीँ पनि आफ्ना लागि उपयुक्त अवसर मिल्न सक्छ भने गाउँमै दुःख किन गरिरहने ? युवाहरूमा आशा सञ्चार भयो । विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त अवसरको खोजीमा सहरबजारका मात्र होइन, गाउँका कुनाकन्दराका बासिन्दासमेत दौडधुपमा लागे । निश्चय नै, विश्वव्यापीकरणका अनेक फाइदा छन्, तथापि गाउँ रित्तिनमा यसलाई एक प्रमुख कारक नमानी सुखै छैन ।
दोस्रो हो— हाम्रो अल्पदृष्टिको परिणाम । विकासका नाममा हामीले आफ्ना परम्परागत शैलीमा परिवर्तन मात्र खोज्यौं । निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्थालाई विकासको बाधक सम्झियौं । यसरी नै पढ्यौं, यसरी नै पढायौं । गुजारामुखी कृषि पद्धति हाम्रा गाउँअनुकूल भएकाले यसैको विकासका लागि सोच्नु र प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने नबुझी हामीले आयातित विकासका सिद्धान्त घोकेर गाउँलाई उपेक्षा गरिरह्यौं । गुरुजनले ‘सहर र समृद्धि’ को गुणगान गर्दै रहे, हामीले गुरुवचन पालना गर्दै रह्यौं । निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्था समृद्धि ल्याउन नसक्ने तल्लो तहको अभ्यास सिद्ध हुँदै रह्यो । आफ्ना लागि आफ्नै परिश्रमले सबै थोक आफैं उत्पादन गर्ने प्रणाली एक किसिमको मोडल हुन सक्छ र यसमै उन्नतिका तौरतरिका खोजिनुपर्छ भन्ने नबुझी यसको विस्थापनमा जोड दियौं ।
कोरोना संक्रमणले हाम्रो चेत केही मात्रामा खुलाइदिएको छ । उन्नति-प्रगति, सुख-समृद्धि र वैभवका लागि दौडधुप गर्ने मानिसका सामु जिउनु मात्र पनि ठूलो चुनौती देखा परेका बेला उपेक्षामा परेका गाउँहरू घना बस्ती हुन सक्ने र बाँझा रहेका खेतबारी हराभरा हुने सम्भावना देखिएको छ । अहिले विदेशमा काम खोसिएर वा आफ्नै देशमा गरिखाने भावनाले अभिप्रेरित भएर केही युवा स्वदेश फर्किंदै छन् । उनीहरूले के काम गर्लान् भनेर सोच्दा गाउँ नै सुरुमा मथिंगलमा आउँछ । हुन पनि पाँच-सात दशकअघि जस्तो अचेलका गाउँहरू अति विकट छैनन् । धेरै ठाउँमा त सहर र गाउँको सुविधामा खासै अन्तर छैन । बिजुली बत्ती नबलेका गाउँ कमै छन् । अधिकांश ठाउँमा घरघरमा अथवा दुई-चार घरबीच खानेपानी पुगेकै छ । प्रारम्भिक शिक्षाका लागि पनि दुइर्×-चार घण्टा हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू अब अपवादका रूपमा मात्र भेटिन्छन् । गाउँगाउँसम्म सडक पुगेका कारण बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनु केही घण्टाको काममा सीमित भएको छ । यातायात सुविधाले आफ्ना उत्पादन अन्यत्र पुर्‍याउन र आवश्यक सामग्री घर ल्याउन पनि दुरूह हुन छोडेको छ, केही हिमाली जिल्लामा बाहेक । यसैले स्वदेश फर्केकाहरूको पहिलो आश्रयस्थल गाउँ र उनीहरूले गर्ने पहिलो कर्म खेतीपाती नै रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ठाउँठाउँमा युवाहरूले कतै व्यक्तिगत रूपमा त कतै सामूहिक रूपमा खेती सुरु नै गरिसकेका सुखद खबरहरू आउन थालिसकेका छन् ।
स्थानीय निकायले युवाका लागि अनेक सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तिनलाई जमिन उपलब्ध गराउने, सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था मिलाइदिने, बीउबिजन र मलको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उत्पादनको बिक्री-वितरणको जिम्मा लिइदिन र बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सकियोभने उत्पादक र उपभोक्ता दुवै थरी लाभान्वित हुन सक्नेछन् । कोरोना संक्रमणबाट हजार कहर सहनुपरे पनि गाउँमा बेरोजगार र अर्धबेरोजगारहरूले काम र दाम अनि भोकमरीबाट मरिने भयका बीच जिउन बाध्य मानिसहरूले आशाका झिल्काहरू देख्न थालेका छन् ।
अन्त्यमा, हाम्रा गाउँमा थालिएका यी विकासका लहर पहिलापहिला जस्तो थालिँदै छोडिँदै गरिएका कार्यक्रम जस्ता नहोलान् भन्ने आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । किनकि यो पहल न त माथिबाट घोषित न अन्यत्रबाट आयातित हो । यो त देशको ऊर्जाशील युवा जमातले आफ्नै अनुभवले सिकेर र बुझेर प्रारम्भ गर्न लागेको अभियान हो । युवा जमातको अनुभूतिजन्य अपनत्वको भावना प्रतिविम्बित भएको हुँदा गाउँ विकासको यो प्रवाहको निरन्तरतामा विश्वास गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:३७